Blog မှာ ပုံလေးတွကို Scroll ပုံစံလေးနဲ့ လုပ်မယ် ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
Blog မှာ ပုံလေးတွကို Scroll ပုံစံလေးနဲ့ လုပ်မယ်
အခုတင်ပေးမယ့် Post လေးကတော့ Blogger ညီကိုများအတွက် သီးသန့် Post လေး
ပါဗျာ။ အောက်မှာလည်း ပြုလုပ်ပုံတွေကို ပုံနဲ့သေချာလေးရှင်းပြပေးထားပါတယ်ဗျာ။ ဘယ်လိုပုံစံလည်း
Image Link နဲ့ Description နေရာမှာတော့ Link နဲ့ ပုံရဲ့အကြောင်းအရာကို ပြင်ရေးပေးရမှာပါဗျာ။
ပြီးတော့ Gadget ရဲ့ အရွယ်အစားဖြစ်တဲ့ width:425px; နဲ့ width:425px; နေရာမှာတော့ မိမိ
ဆိုဒ်နဲ့ချိန်ပြီး သင့်တော်သလို ညှိပေးရမှာပါ။
<li><a href="#"><img src="IMAGE LINK" width="75" height="75" alt="Description" /></a></li>
5. Save the widget and you are all done!
သည်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်... မရှင်းတာရှိပါက ပြောခဲ့ပါနော်